क्यान्सरका बिरामीको पिसिआर परीक्षण गर्न मोलिक्यूलर ल्याब सञ्चालनमा – Health Post Nepal
२०७७ भदौ २४ गते १३:३९
बीपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशालाको उद्घाटन गरेको छ । प्रयोगशाला आइतवारबाट सञ्चालनमा ल्याईएपनि १०७ औँ बीपी जयन्तीको अवसर पारेर बुधवार औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरिएको हो ।
प्रयोगशालाको उद्घाटन कोरोना संक्रमित भै निको भएकी अस्पतालकै पहिलो स्वास्थ्यकर्मी पुजा श्रेष्ठ तथा १३औँ चाईनिज मेडिकल टिमका लिडरले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । परीक्षण शुरुभएपछि उपचार गर्न आएका विरामीलाई सहज हुने अस्पतालले अनुमान गरेको छ ।
बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दै गएपछि आफ्नै प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको अस्पतालका उपनिर्देशक डा. कृष्णसागर शर्माले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा क्यान्सरका बिरामीको कोरोना परीक्षणका लागि अस्पतालले स्वाब संकलन गरि भरतपुरले प्रयोगशालामा पठाउने गरेको थियो । त्यहाँबाट समयमा परीक्षण नहुँदा बिरामी समस्यामा पर्दै आएका थिए ।
अस्पतालले अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, बिरामी र स्थानीयको परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएर परीक्षण गर्ने डा. शर्माले जानकारी दिए।
प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न ११ जनाको जनशक्ति खटिएको छ। पिसिआर परिक्षणका लागि तीन हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। यस प्रयोगशालामा एकपटमा ९० वटा नमुना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहको छ ।
कोभिड–१९ प्रयोगशालाको उद्घाटन कार्यक्रममा अस्पतालका अध्यक्ष डा. निर्मल लामिछाने, कार्यकारी निर्देशक डा. देजकुमार गौतम, उपनिर्देशक डा. कृष्णसागर शर्मा, अस्पतालका विभिन्न विभागका प्रमुख, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो।
बीपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल